HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Myama Ndebele Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
MILAZA ny Jaona 4:24 fa “Andriamanitra dia Fanahy”, ka tsy afaka mahita azy isika. Nisy olona anefa lazain’ny Baiboly fa nahita an’Andriamanitra. (Hebreo 11:27) Tena nahita azy ve izy ireo? Afaka mahita an’ilay “Andriamanitra tsy hita maso” tokoa ve ianao?—Kolosianina 1:15.
Eritrereto ny olona iray jamba hatrany an-kibon-dreniny. Tsy afaka mahalala ny zava-mitranga manodidina azy mihitsy ve izy satria hoe jamba? Tsia. Misy fomba maro amantarany olona, zavatra, ary izay mitranga manodidina azy. “Tsy ny maso ihany no ahafahana mahita”, hoy ny lehilahy jamba iray, “fa ny saina koa.”
Na tsy afaka mahita an’Andriamanitra amin’ny masonao koa aza ianao, dia afaka mahita azy amin’ny ‘mason’ny fonao.’ (Efesianina 1:18) Ireto misy fomba telo azonao anaovana an’izany.
“HITA MAZAVA HATRAMIN’NY NAMORONANA IZAO TONTOLO IZAO”
Matetika no malady kokoa ny sofin’ny jamba ary mahay mamanta-javatra kokoa ny tanany. Izany no ampiasainy hamantarana ny zavatra tsy hitany. Afaka mampiasa ny vavahadin-tsainao koa ianao, mba handinihanao ny zavaboary sy hamantaranao an’ilay Andriamanitra tsy hita maso namorona azy ireny. ‘Ny toetrany tsy hita maso, dia hita mazava hatramin’ny namoronana izao tontolo izao, satria hita amin’ny zavatra nataony.’—Romanina 1:20.
Diniho, ohatra, ny Tany. Tsy natao hipetrahana fotsiny izy io, fa mba hahafahantsika hankafy fiainana koa. Mahita fahafinaretana erỳ isika rehefa misy tsiotsio-drivotra, na maka ny anjara masoandrontsika, na mihinana voankazo, na maheno vorona misiotsioka. Tsy hita amin’izany ve fa miahy sy tena tia antsika ny Mpamorona sady malala-tanana?
Hita amin’izao rehetra izao koa fa manana hery lehibe Andriamanitra. Hita tamin’ny fikarohana nataon’ny mpahay siansa vao haingana, ohatra, fa mitatra izao rehetra izao satria mihamifanalavitra haingana be ny vahindanitra. Rehefa mandinika ny lanitra ianao amin’ny alina, dia eritrereto hoe: Hery avy aiza no mahatonga an’izao rehetra izao hitatra haingana be toy izany? Milaza amintsika ny Baiboly fa ‘manana tanjaka lehibe’ ny Mpamorona. (Isaia 40:26) Hita amin’ny zavatra noforoniny tokoa hoe “Mahery Indrindra” na “lehibe amin’ny hery” izy.—Joba 37:23.
NISY OLONA IRAY “NANAZAVA NY AMINY”
Hoy ny vehivavy iray manan-janaka jamba roa: “Ny resaka atao aminy no tena ahalalany zavatra. Lazao aminy daholo izay hitanao sy renao, dia hazavao aminy koa izay hitanao rehefa miaraka eny an-dalana ianareo. Ianao mantsy no masony.” Misy fomba iray faran’izay tsara koa ahalalantsika an’Andriamanitra. Marina fa “tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana.” “Nanazava ny aminy” anefa i Jesosy Zanany, “izay eo an-tratran’ny Ray.” (Jaona 1:18) Izy mantsy no noforonin’Andriamanitra voalohany sady Zanany lahitokana, ka toy ny ‘maso’ ahafantarantsika ny any an-danitra izy.
Efa an-tapitrisany taona i Jesosy no niaraka tamin’ny Rainy. Ireto misy zavatra vitsivitsy nohazavainy momba an’Andriamanitra:
Miasa foana Andriamanitra. “Ny Raiko tsy mitsahatra miasa mandraka ankehitriny.”—Jaona 5:17.
Fantatr’Andriamanitra izay ilaintsika. “Fantatr’Andriamanitra Rainareo izay ilainareo, raha mbola tsy mangataka aminy akory aza ianareo.”—Matio 6:8.
Manome izay ilaintsika Andriamanitra. “Ny Rainareo izay any an-danitra ... mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mandatsaka ny orana amin’ny marina sy ny tsy marina.”—Matio 5:45.
Sarobidy amin’Andriamanitra isika tsirairay. “Tsy vola madinika kely vidy ve no ivarotana fody roa? Tsy hisy ho latsaka amin’ny tany anefa ireny na iray aza, ka tsy ho fantatry ny Rainareo. Ary na ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra, fa sarobidy noho ny fody maro ianareo.”—Matio 10:29-31.
OLONA IRAY MITOVY TOETRA AMINY
Matetika no hafa mihitsy ny fahazoan’ny jamba hevitra iray, fa tsy hoatran’ny an’ny olona mahita. Tsy hoe faritra maizina tsy misy tara-masoandro, ohatra, no fahazoany ny hoe aloka, fa faritra mangatsiatsiaka tsy tratran’ny hafanana mandoro. Tsy afaka mahita aloka na tara-masoandro ny jamba. Tsy ho vitantsika samirery koa ny hahalala an’i Jehovah. Nandefa olona hanampy antsika àry i Jehovah ary tena mitovy tanteraka amin’ny toetrany ny toetran’izy io.
I Jesosy izany olona izany. (Filipianina 2:7) Tsy niresaka momba an’Andriamanitra Rainy fotsiny i Jesosy, fa nampiseho tamin’ny atao koa hoe hoatran’ny ahoana izy. Rehefa nilaza taminy i Filipo mpianany hoe “Tompo ô, asehoy anay ny Ray”, dia hoy izy: “Izay nahita ahy dia nahita ny Ray koa.” (Jaona 14:8, 9) Inona àry no mety ho ‘hitantsika’ momba an’Andriamanitra, rehefa mandinika ny nataon’i Jesosy isika?
Tia olona sy nanetry tena ary mora hatonina i Jesosy. (Matio 11:28-30) Ny toetrany no tena nahatonga ny olona hanatona azy. Tsapany ny fahorian’ny olona, ary faly izy rehefa faly izy ireo. (Lioka 10:17, 21; Jaona 11:32-35) Rehefa mamaky na mihaino ny tantaran’i Jesosy ao amin’ny Baiboly ianao, dia ataovy toy ny hoe hitanao sy renao ary iainanao ilay zava-nitranga. Ho fantatrao kokoa ny toetran’Andriamanitra, raha misaintsaina ny fomba nitondran’i Jesosy ny olona ianao. Ho afaka hifandray kokoa amin’ilay Rainao any an-danitra ianao amin’izay.
ATAMBATAMBARO NY FANAZAVANA AZONAO
Hoy ny mpanoratra iray momba ny jamba: “Be dia be ny fomba amantarany zavatra, ohatra hoe amin’ny alalan’ny tanana sy ny orona ary ny sofina. Izay hevitra fantany amin’ny alalan’ireo no atambatambany.” Toy izany koa fa ho azonao sary an-tsaina kokoa hoe hoatran’ny ahoana i Jehovah, raha mandinika ny zavatra noforoniny ianao, mamaky izay nolazain’i Jesosy momba azy, ary mandinika ny fomba nanehoan’i Jesosy ny toetrany. Ho resy lahatra kokoa ianao amin’izay hoe tena misy izy.
Izany no tsapan’i Joba fahiny. ‘Tsy takatry ny sainy’ ny zavatra noteneniny, tamin’ny voalohany. (Joba 42:3) Hoy anefa izy rehefa nandinika tsara an’ireo zavatra mahatalanjona nataon’Andriamanitra: “Honohono fotsiny no nandrenesako ny momba anao, fa izao kosa dia ny masoko mihitsy no mahita anao.”—Joba 42:5.
‘Raha mitady an’i Jehovah ianao, dia hataony izay hahitanao azy’
Afaka ny hahita an’i Jehovah toa an’i Joba koa ianao. “Raha mitady azy ianao, dia hataony izay hahitanao azy.” (1 Tantara 28:9) Vonona hanampy anao hitady sy hahita an’ilay Andriamanitra tsy hita maso ny Vavolombelon’i Jehovah.
Hizara Hizara Afaka Mahita An’ilay Andriamanitra Tsy Hita Maso ve Ianao?
Manambara ny Voninahitr’Andriamanitra ny Hakanton’ny Zavaboary